चीनको नजरमा अमेरिका ‘हरुवा’ - Dainik Online Dainik Online
चीनको नजरमा अमेरिका ‘हरुवा’
प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०७८, बिहिबार ३ : ५९
विद्रोही तालिबानले यसैहप्ताको आइतबारदेखि अफगानिस्तान पूर्ण रुपमा कब्जा गरेका छन्। उनीहरुले सरकार निर्माणको गृहकार्य सुरुवात गरिसकेका छन्। यसबीचमा अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्नो नागरिक र कूटनीतिज्ञहरुलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइरहेका छन्। अमेरिकाले ३१ अगष्टसम्म उद्धार कार्य जारी राख्ने बताएको छ।
अमेरिकाले हेलिकप्टर तथा विमानहरुमा उद्धार कार्य गरिरहेको तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन्। यसबीचमा चीनले अफगानिस्तानबाट हाल फर्किरहेका अमेरिकीलाई भियतनाको घटनासँग तुलना गरेका छन्। समग्रमा चीनले अमेरिकालाई ‘हरुवा’को संज्ञा दिएको हो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले ट्विटरमा तस्बिरहरु सार्वजनिक गरेकी छिन्। त्यहाँ सन् १९७५ मा अमेरिकी सेना भियतनामबाट फर्किदै गरेको तस्बिर र अहिले अमेरिकीहरु अफगानिस्तानबाट फर्किदै गरेको तस्बिर छ। उनले क्याप्सनमा भनेकी छिन्,‘मानिसहरुले सन् १९७५ मा भियतनाममा जे देखे अहिले अफगानिस्तानमा त्यही देखिरहेका छन्।’
पहिलो तस्बिर भियतनामको हो। जहाँ अमेरिकी दूतावासको छतबाट हेलिकप्टरमा अमेरिकीको उद्धार गरिँदै छ। दोस्रो तस्बिरमा पनि हेलिकप्टरमा अमेरिकी नागरिको उद्धार गरिएको देखिएको छ। दुवै तस्बिरले अमेरिकीको हार दर्शाउँछ। अमेरिकी सेनाहरु अफगानिस्तानबाट फर्किएसँगै तालिबानले केही समयमै अफगानिस्तान पुरै कब्जा गरेको थियो।
सैगोनमा के भएको थियो?
People saw this in 1975 in #Vietnam. And now see it in #Afghanistan. pic.twitter.com/n2Z8wPidGG
— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 17, 2021
काबुलबाट अमेरिकीहरु फर्किरहेको अवस्थामा सामाजिक संजालमा भियतनाम युद्धको तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन्। जहाँ अमेरिकी हेलिकप्टर स्वदेश फर्किरहेको देखिएको छ। सन् १९७५ मा फोटोग्राफर हलबर्ट वेन एसले भियतनाम युद्ध सकिएपछि एउटा यादगार तस्बिर खिचेका थिए जहाँ भियतनाको सबैभन्दा ठूलो शहर सैगोनको छतबाट अमेरिकी हेलिकप्टरहरु स्वेदश फर्किएका थिए।
विश्लेषकहरु हाल सार्वजनिक दुवै तस्बिरले अमेरिकी पतन देखाउने बताउँछन्। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमाजस्तै भियतनाममा पनि २० वर्ष युद्ध गरेको थियो। अमेरिकाले दक्षिणी भियतनामलाई सहयोग गरेको थियो अर्कोतर्फ उत्तरी भियतनाको कम्युनिस्ट सरकारले टक्कर दिइरहेको थियो। यो लडाइँमा अमेरिकी धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो।
सैगोनको पतन त्यो घटनालाई भनिन्छ जब अप्रिल ३०, सन् १९७५ मा कम्युनिस्ट फौजले सैगोन कब्जा गरेका थिए।
अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद हुँदै आएको छ। उनीहरुले कसैको कमजोरी पाएको खण्डमा आलोचना गर्न उत्रिहाल्छन्। वर्तमान समयमा अमेरिका र चीनबीच प्रविधि, भूराजनीति, व्यापार, मानवअधिकार लगायतको विषयमा विवाद छ।
चीन दिनदिनै प्रविधिको क्षेत्रमा शक्तिशाली बनिरहेको छ। चीन एक्लैले स्पेस स्टेसन बनाइरहेको छ। तर चीनले बौद्धिक चोरी गरेर प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको अमेरिकी आरोप छ। हतियार विकास गर्नमा यतिबेला अमेरिकापछि चीन नै अग्रपंक्तिमा छ।
अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई उछिन्ने लक्ष्य लिएको चीनमाथि अमेरिकाले उइगर मुस्लिमको मानवअधिकार खोसेको आरोप लगाउने गरेको छ। अमेरिका ताइवान र हङकङको विषयमा चीनको आलोचना गरिरहन्छ।